हेगको हिरो - परिहास - नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका द्वितीय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिखेर दंगावस्थामा छन् । किनभने उनलाई उनकै कुनै एक पूर्वलडाकूले हेग लैजाने धम्की दिएका छन् । त्यही धम्की सुनेर प्रचण्ड दंग परेका रहेछन् । आफ्नो यो अवस्थाबारे उनले खुलस्त पनि गरे, “हेग पुगेपछि म त हिरो पो हुन्छु !”
उनको यो वाणी सुनेर धेरैलाई लागेको रहेछ, लडाकू भाइले हेग भनेको कमरेड प्रचण्डले हलिउड पो सुनेछन् कि क्या हो ? हेग भनेको अर्कै ठाउँ हो, हलिउड भनेको अर्कै ठाउँ हो । यो दुई ठाउँले उत्पादन गर्ने वस्तु नै फरक छ । हलिउडले हिरो उत्पादन गर्छ, हेगले भिलेन उत्पादन गर्छ । उनी जानुपर्ने हेग हो । अब हेग पुगेर हिरो कसरी भइन्छ ?
त्यसो त अहिले सिनेमामा नयाँ ट्रेन्ड पनि आइरहेको देखिन्छ । जो भिलेन हो, त्यही हिरो बन्छ, जो हिरो हो, त्यो भिलेन–भिलेनजस्तो लाग्छ । अब हेगको सिनेमा उद्योगले पनि यस्तै सिनेमा बनाउन लागेको रहेछ भने अर्कै कुरा भो ।
प्रकाशित: श्रावण १६, २०७६